မူဂါဘီရဲ့ အလောင်းကို စင်ကာပူကနေ သယ်သွား | MCN (MYANMAR CHANNEL NEWS)
Home သတင်း နိုငျငံတကာသတငျး မူဂါဘီရဲ့ အလောင်းကို စင်ကာပူကနေ သယ်သွား
A hearse transporting the body of former Zimbabwean president Robert Mugabe leaves the Singapore Casket funeral parlour in Singapore on September 11, 2019, to head to an airport and be flown back to Zimbabwe for burial. - Mugabe,aguerrilla leader who swept to power after Zimbabwe's independence from Britain and went on to rule for 37 years until he was ousted in 2017, died on September 6, aged 95. (Photo by ROSLAN RAHMAN / AFP)
မူဂါဘီရဲ့ အလောင်းကို စင်ကာပူကနေ သယ်သွား
ဇင်ဘာဘွေ အာဏာရှင်ဟောင်း ရောဘတ် မူဂါဘီရဲ့ အလောင်းကို စင်ကာပူကနေ ဇင်ဘာဘွေမှာ သင်္ဂြိုဟ်ဖို့ ဒီနေ့ စက်တင်ဘာလ ၁၁ ရက်မှာ သယ်ယူသွားပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
ဇင်ဘာဘွေ နိုင်ငံကို ဗြိတိန်ဆီကနေ လွတ်လပ်ရေးရအောင် တိုက်ယူခဲ့တဲ့ မူဂါဘီဟာ ဇင်ဘာဘွေကို ၃၇ နှစ်ကြာ အုပ်ချုပ်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၇ ခုနှစ်မှာ ရာထူးကနေ နုတ်ထွက်ပေးခဲ့ရပါတယ်။ မူဂါဘီဟာ စက်တင်ဘာလ ၆ ရက်နေ့က စင်ကာပူမှာ ဆေးကုသရင်း အသက် ၉၅ နှစ်မှာ သေဆုံးခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလမှာ စစ်တပ်နဲ့ သူ့ကို သစ္စာခံခဲ့သူတွေက မူဂါဘီကို ရာထူးကနေ ဖြုတ်ချခဲ့ပြီးနောက် ဇင်ဘာဘွေမှာ အာဏာရှင် အုပ်စိုးမှုနဲ့ စီးပွားရေး ချွတ်ခြုံကျမှု အဆုံးသတ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီနောက် မူဂါဘီရဲ့ ကျန်းမာရေးလည်း ကျဆင်းခဲ့ပါတယ်။
မူဂါဘီရဲ့ အလောငျးကို စငျကာပူကနေ သယျသှား
ဇငျဘာဘှေ အာဏာရှငျဟောငျး ရောဘတျ မူဂါဘီရဲ့ အလောငျးကို စငျကာပူကနေ ဇငျဘာဘှမှော သင်ျဂွိုဟျဖို့ ဒီနေ့ စကျတငျဘာလ ၁၁ ရကျမှာ သယျယူသှားပွီ ဖွဈပါတယျ။
ဇငျဘာဘှေ နိုငျငံကို ဗွိတိနျဆီကနေ လှတျလပျရေးရအောငျ တိုကျယူခဲ့တဲ့ မူဂါဘီဟာ ဇငျဘာဘှကေို ၃၇ နှဈကွာ အုပျခြုပျခဲ့ပွီး ၂၀၁၇ ခုနှဈမှာ ရာထူးကနေ နုတျထှကျပေးခဲ့ရပါတယျ။ မူဂါဘီဟာ စကျတငျဘာလ ၆ ရကျနကေ့ စငျကာပူမှာ ဆေးကုသရငျး အသကျ ၉၅ နှဈမှာ သဆေုံးခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။
၂၀၁၇ ခုနှဈ၊ နိုဝငျဘာလမှာ စဈတပျနဲ့ သူ့ကို သစ်စာခံခဲ့သူတှကေ မူဂါဘီကို ရာထူးကနေ ဖွုတျခခြဲ့ပွီးနောကျ ဇငျဘာဘှမှော အာဏာရှငျ အုပျစိုးမှုနဲ့ စီးပှားရေး ခြှတျခွုံကမြှု အဆုံးသတျခဲ့ပါတယျ။ အဲဒီနောကျ မူဂါဘီရဲ့ ကနျြးမာရေးလညျး ကဆြငျးခဲ့ပါတယျ။
Previous articleသမ္မတ ဦးဝင်းမြင့် ကနေဒါ သံအမတ်ကြီးနဲ့ စီးပွားရေးအပါအဝင် တခြား ကဏ္ဍတွေ ဆွေးနွေး
Next articleသြစတြေးလျ နိုင်ငံသား သုံးဦး အီရန်မှာ အဖမ်းခံရ